The Irrawaddy's Blog: လိင်ပြောင်းထားတဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်မယ်
လိင်ပြောင်းထားတဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်မယ်
(Rainbow မှာရေးထားတာကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ပြန်လည် ဖော်ပြပါတယ်။)
လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးတွေ အတော်များများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ထားတဲ့ ပထမဦးဆုံး လေယာဉ်မယ်လေးရဲ့ အကြောင်းကို အားလုံး သိရှိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PC လေကြောင်းလိုင်းက ၂၀၀၇ခုနှစ် မစ် (စ်) တက်ဖနီဆုရ ပထမဦးဆုံး လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ သန်ရာလတ်ကို လေယဉ်မယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေကို ညှာတာထောက်ထား အသိမှတ်ပြုတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလို့ အသိမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်၊
အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက် တချို့သဘောမတူတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကို ကျနော်သတိရနေပါသေးတယ်။ ဝေါလ်အိက်စ်ပို ၂၀၁၀ ကျင်းပတုန်းက အခမ်းအနားဦးဆောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော် စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခမ်းအနားကို ကျင်းပဖို့ မတိုင်မီလေးမှာ သူတို့အဖွဲ့တွေကို တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို သွားပြီးတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို လေးစားအသိမှတ်ပြုမှု အကြောင်းကို သွားပြီးတော့ သုတေသန ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးပြူငှာတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်က ထိုင်းတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးပျူငှာတဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပြွန်မှု၊ နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းအစားအသောက်နဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက လေဒီဘွိုင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂျီမတွေဟာ လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ထင်ဟင်ပြနေတာတင် မကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ဆိုတာကို လူတိုင်း သတိပြုမိကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခု ကျနော်ပြောနေတာကို သဘောမတူတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ဘန်ကောက်မြို့က ဘယ်လောက်အထိ ဂေး ဆန်တယ်ဆိုတာ တက္ကစီကားတွေကိုကြည့်လိုက် ပန်းရောင်တွေနဲ့ ပြည့်လို့နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေးတွေ ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဆိုရင်လည်း အတော်များများ ၀တ်လေ့ဝတ်ထရှိတဲ့ ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ ဆိုတာကိုလည်း ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံး တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ ကျနော်တို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာရဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Outlook မှာဆိုလို့ရှိရင် ဖီးချားစတိုရီအနေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှု အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို ဆောင်းပါးရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆောင်းပါးတွေဟာ လူဖတ်တော်တော်များတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုကတော့ Outlook ကနေပြီးတော့ Life ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပြောင်းပြီး ပြန်လည်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိလာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီလိုက်ဖ်ထဲမှာလည်း လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဘယ်တော့များ ပါလာမလဲဆိုတာကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါမှမဟုတ် မတူကွဲပြားတဲ့ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ထိုင်းသတင်းမီဒီယာလောကမှာ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောစရာအကြောင်းအရာ တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး ထိုင်းလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ထင်ဟပ်ဖော်ထုတ်ပြလေ့ မရှိသလို ဒီလို လူတွေရဲ့ ဘ၀ ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း အသိမှတ်ပြု ရေးသားတင်ပြတာမျိုး မပြုလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာအဖွဲ့က အခုချိန်ကနေစပြီး လတိုင်း တစ်လမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း သတင်း ဆောင်းပါး စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြသွားဖို့ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို စတင်ချမှတ်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘန်ကောက်ပို့စ်ရဲ့ လိုက်ဖ်ကဏ္ဍကလည်း လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့တော့ ရှိပါတယ်။
ရက်တော့ အတိအကျ ကျနော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာတယောက်က ကျနော့်ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့ပါတယ်။
သူမေးတာက ခင်ဗျားတို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းဌာနအနေနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ လိင်ခွဲစိတ်ပြီးထားတဲ့ ဂျီမလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြီးရင် မိတ်ကပ်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြီးလို့ရှိရင် အောက်လွီတွေမှာ လိုက်ကနေတဲ့ ဂျီမလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို ဒီနေရာတွေဟာ ဂျီမတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ သူများသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ဂျီမတစ်ယောက်ယောက်ကို အင်တာဗျူးပြီး ထည့်ပေးပါလားလို့ သတင်းစာတိုက်ကို တောင်းဆိုလာပါတယ်။
သတင်းစာတိုက်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဒီအကြောင်းကို ရေးတဲ့သူက ကျနော်ပဲဖြစ်နေတော့ ကျနော့်လက်ထဲကို အဲဒီစာ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီတုန်းက ကျနော် ခေါင်းတော်တော်စားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကျနော် လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့သူ ရှိနေပါပြီ။ အဲဒါက တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဏကပြောတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်းလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လိင်ကွဲပြားမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တန်းတူရေးကို စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ အတော်လေး အမြင်ပွင့်လင်းလာကြပြီလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီလိုလူတွေအတွက် နောက်ထပ် အခြားအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဆက်လက်ပြီး လက်ခံအသိမှတ်ပြုဖို့အတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၂၇ရက်၊ ဂျူလိုင်လ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်။
ဦးအောင်ဇေယျကို အထင်ကြီးမိတာ မှားပေါ့ ဂျီပုန်းနိုင်ငံကိုမှ သွားပြီးအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာကိုး နိုင်ပေမပေါ့
လေယာဉ်လိုင်းက နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တာ ဖြစ်မယ်။ စီးပွားရေးသမား ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲ ဘာပြောင်းပြောင်း အတုဟာ အတုပါပဲ။
very very sweet, cause I'm gay
ရောဝတီကမောင်တွေအရင် မိန်းမအဖြစ်ပြောင်းပေးပါရန်၊အားပေးချင်ပါသည် ဟီးဟီး
I LIKE IT. THANKS FOR THIS COMMENT.
လူတွေနော်ရတာမလို၊လိုတာမရ၊မရှိတာလိုခြင်၊ရှိရင်လဲပြစ်ခြင်ပြန်၊မဟန်တော့မှ၊အမှန်ကိုသတိရရင်.အို အို အို....
i really doubt that taxi's color represents something. i mean, bloggers from irrawaddy know this country very well. their taxis are mostly in3colors, blue, yellow, and pink. those colors represent something else in their country, arent they? like every monday, some offices wear yellow shirts. and every friday, pink or blue shirts (sorry i dont remember the correct one).
ခုတော့ ဂျီပုန်းတွေဆီမှာ အောင်ဇေယျမျိုးဆက်တွေ ဘာဖြစ်နေကြပြီလဲ....
အင်း အခြောက်အခွင့်အရေး သိပ်ပြီး အလေးပေးနေ၊ တစ်နေ့ကျ အဲဒီနိုင်ငံမှာ အခြောက်က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ မယုံရင် စောင့်ကြည့်၊ ခုတောင် သူတို့ဆီမှာ အမျိုးသားဘ၀ ကနေ အမျိုးသမီးအဖြစ် ပြောင်းချင်တဲ့ အမျိုးသားက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပြီတဲ့၊ အဲဒါ နဲတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းလား၊ ကောင်းကြဦးတော့မှာပေါ့။
They are ဂျီပုန်း ,Cause their old past life's kama,
they made mistakes many things with other 's wives and virgin daughters of other persons in their old men 's life, so their mind change to women although they own men's bodies,So they are so poor person.
August 1, 2011 at 4:43 AM
မင်းတို့ ဘလော့ဂ်က သတင်းဘလော့ဂ်လား။ စီးပွားရှာစားတဲ့ ကြော်ငြာဘလော့ဂ်လား။
လူမျိုးရေးဝါဒအစွဲထားပြီး သူတပါးလူမျိုးကို နှိမ်တာမကောင်းပါဘူး။ ဗမာလူမျိုးများကိုလည်း အင်္ဂလိပ် သွေးရောနေတဲ့လူမျိုးလို့ပြောလျှင်လက်မခံနိုင်သလို ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုလည်းဒီလိုနှိမ်တာမကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာပါ။ လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးများစွာ ( ၃သန်း) ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆင်းဆင်းရဲရဲ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာကို ကောစဉ်းစားပါ။ သမိုင်းဟာ သင်ခန်းစာ ယူတတ်ဘို့ဖြစ်ပြီး သူတပါးကို နှိမ်တတ်အောင်၊ တဖက်စွန်းရောက် လူမျိုးစွဲ ဝါဒ ကိုသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ယခုခေတ်ပညာရေးစနစ်မှာသမိုင်းကို အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်အောင် သင်ပေးနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်မြင်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပြော သလိုပြော ရလျှင် ခင်ဗျားတို့စောက်ကျင့်တွေပြောင်းဖို့လိုပြီး။
လောကကြီးဟာသူ့ ရေစီးကြောင်းအတိုင်း သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒပြုလုပ်မှု့ ကံတွေအရဘယ်သူ့ ကိုမှဘက်မလိုက်စီးစင်းနေပါ တယ် .. အခြောက်ဖြစ်ရမဲ့ လူကိုသူပြုလုပ်တဲ့ ကံကစီမံပြီးသားပါ..ဘယ်သူ့ ရဲ့သွေးထိုး ဖိအားကြောင့်မှအဲဒါကြီးကိုပြုပြင်ယူမရပါ..မြန်မာပြည်ကဦးနှောက်ဆေးထားခံရတဲ့ သူ တွေ မှာ တော့ သနားစရာ အရာရာကိုထိမ်းချုပ်သင်းကွတ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောင်ကျင်းကျင်းလေးထဲကအခုထိမထွက်နိုင်ပါ.
.မြန်မာတွေအမြဲအပစ်ပြောနေတဲ့ထိုင်းလူ့ အဖွဲ့ အစည်းဟာသိပ်ကိုအချိူးညီညီတိုးတက်နေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀နဲ့ ယှဉ်ရင်နံသာဆီ နဲ့ ……….ကွာသလိုပါဘဲနော်.. ဆရာတော်တပါးဟောသလိုဆိုရင်မြန်မာပြည်လူဖြစ်ရတာဗုဒ္ဒတ၇ားတော်နဲ့ တွေ့၇တာကလွဲလို့ အစစအ၇ာ၇ာလူဖြစ်ရှုံးတယ်တဲ့…
yourfatherishere said... :
တော်ပါသေးရဲ့ ဗျာ၊ အခြောက်ဆိုပြီး နာမည်တပ်ပေးထားလို့ ။မပာုတ်ရင်ပြစ်မှားမိမှာ ကျိန်းသေတယ် ။အမလေး.. ကျောင်းဆရာကြီးပါလား..ပာက်ပာက်
August 1, 2011 at 11:14 AM
Gays are not devil
devil are the way to gossips...and they have no brains...be adult
July 31, 2011 4:59 PM
တောက် ဘုရင့်နောင်လည်း ပါသေးသကွ... :(
coz they were born this way
it'sapart of human right*****
julymoe said... :
အတုတွေ အစစ်တွေနဲပြောမနေကြဘဲ၊ လုးံသည်ဖြစ်စေ
ပြားသည်ဖြစ်စေ တကယ်တော့ လူဟာ လူပါဘဲ.....
လူနဲ့တူသောအတွေး လူနဲတူသော ခံစားနားလည်မှု့တွေ
ရှိနေကြရင် လူသားတစ်ယောက်တိုင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်စွာ
ခံစားခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ နားလည်ခွင့်လွတ်နိင်မှာပါ....
သည်ဖြစ်စေ ပြားသည်ဖြစ်စေ လူဟာ လူပါဘဲ..
လူနဲ့ တူတဲ့ အခွင့်ရေး လူသားတိုင်းမှာ ခံစားခွင့် ခံယူ
အော် ...လူတွေများ တိုက်စစ်ကနေ ခံစစ်ဘက်ရောက်အောင် လုပ်ရတယ်လို့ ... ဟီး ..ဟီး ...
ုတို့ကတော့ တိုက်စစ်မှူးပဲ ....
Cruser said... :
brillant piece of information, I had come to know about your web-page from my friend hardkik, chennai,i have read atleast9posts of yours by now, and let me tell you, your webpage gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i'm already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanxamillion once again, Regards, gossips